Maxaa dib u soo celiya AutoCAD ws XMUMX - Geofumadas
Febraayo, 2011 Apple - Mac, AutoCAD-AutoDesk, tabo cusub, Video
1.2 version of AutoCAD 2011 WS ayaa la sii daayay, in codsi cajiib ah AutoDesk lacag la'aan ah oo kuu ogolaaneysa in aad shaqeyso internetka iyo qalab mobile.
Waa horumar la taaban karo, inkastoo xaqiiqda ah in moobilka mobile-ka uu dib ugu soo laabanayo wax kasta oo ku shaqeynaya internetka. Horumarintaan waxaa ka mid ah:
Taageerada Layouts. Inta ugu fiican, ka hor intaadan kaliya ka shaqayn karin heerka goobta shaqada, laakin isku-xirka sheybaarada daabacaadda waxaad ka heli kartaa faa'iido badan oo soo bandhigida alaabta kama dambaysta ah.
Luqado badan Hadda waxay taageertaa Shiinaha, Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga, Japanese, Kuuriya iyo Dabcan Isbaanish iyo Bortuqiis. Fikradayda, arjigaan wuxuu yeelan doonaa kala-duwanaansho weyn waxaana uu AutoDesk ka faa'iideysan doonaa booskiisa si uu uga faa'iidaysto codsiyada moobiillada sababtoo ah qofna ma dhicin heerkan. Ma ahan bilaash iyo ka qaybqaadasho badan oo suuqa ah.
Dabacsanaanta farsamo Tani waa mid weyn, si aanay u qaldamin in la qabsado barta aanad haysan koontarool fiican markaad isticmaalayso farahaaga -ama ciddiyaha-, kubbadda yar ee dheereynta oo na tusaysa duulimaadka sida qabsashada ay u eegi doonto.
Nuqul / dheji. Tani ma aha mid cusub, waa mid ku dhawaad ​​middani waxay ku jirtaa qaybta internetka. Laakiin heerarka kiniiniga ayaa ah, waxay igu qaadatay aduunyo si ay u isticmaalaan labo farood si ay ugu socdaan muraayadda muraayadda. Laakiin marka ugu dambeysa waddada aan ku guuleysto, iyo aragtida keenaysa in lagu sameeyo qaab nololeed waa wax aan la ilaawi karin.
Intaa waxaa dheer, sawir-gacmeed xor ah, oo loo yaqaano sida Caday, si aad u sameyso qoraal. Iyo horumarin kale oo aan muhiim ahayn, sidoo kale Anglo-Saxons Cutubyada Ingiriisiga.
Sidaa darteed, furan Itunes iyo download soo cusbooneysiin ...
Halkan waxaad ku arki kartaa shaqeyn
Post Previous«Previous AutoCAD 2012 Goorma?
Post Next 3.1 news WordPressNext »
2 Jawaab ah "Maxaa dib u soo celiya AutoCAD ws XUMOW"
Diido, laga yaabo in ay noqoto mid ku xiga.
Hello, ma jirtaa hab lagu helo isku-duwayaasha si loo fuliyo goobta? Waxaan noqon lahaa mid waxtar leh.